SolarHome Closes $2Million Series A-2 Equity Round | Myanmar Business Today
HomeBusinessSolarHome Closes $2Million Series A-2 Equity Round
Bringing in new investors Anthem Asia and DPI Energy Ventures, as well as prior investors TRIREC, Insitor Impact Asia
Fund, Great Noble Ventures, and FORUM, the additional financing provides firepower for
SolarHome,apioneer in Pay-As-You-Go (PAYG) solar for off-grid households in Myanmar, today announced the closing of its Series A-2 Equity round.
Since its founding in 2017, SolarHome has achieved market leadership in Myanmar by launching an extensive product range addressing all segments of market demand. The Company has also raised over $8 million in debt and equity from leading impact and angel investors and served over 35,000 homes across Myanmar. SolarHome social enterprise leadership has been recognized by CleanTech APAC’s 25 List of Most Innovative Companies, as well as E27’s Top 10 Social Impact Start-ups in Southeast Asia.
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လျှပ်စစ်မီးမရရှိသေးသည့် အိမ်ထောင်စုများအတွက် ရေရှည်အကျိုးပြု Pay-As-You-Go (PAYG) ကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည့် ဆိုလာဟုမ်းသည် Series A-2 Equity round ကို ရင်းနှီးမြှပ်နှံငွေ ဒေါ်လာ ၂သန်း ဖြင့် အပြီးသတ်လိုက်ကြောင်း ယနေ့ ကြေငြာလိုက်သည်။
ယခုအသုတ် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမူတွင် TRIREC နှင့် Insitor Impact Asia Fund တို့နှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမူလုပ်ငန်းများ၌ ဦးဆောင်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် Anthem Asia Myanmar SME Venture Fund နှင့် အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသတွင်းရှိ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ စွမ်းအင်နယ်ပယ် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမူတွင် ထိပ်တန်း ကုမ္ပဏီ ဖြစ်သည့် DPI Energy Ventures တို့ ပါဝင်လာကြသည်။
ဆိုလာဟုမ်းသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များဖြင့် နိုင်ငံအနှံ ဒေသအလိုက် အသွားအလာ ကန့်သတ်မူများကြားတွင် ကြံ့ကြံ့ခံရင်း အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်ကို ပြသနိုင်ခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့် ၆လအတွင်း ဆိုလာဟုမ်းသည် အလင်းရောင် လိုအပ်နေသည့် ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၄၈၀၀ ကျော်ကို ဆိုလာစွမ်းအင် ထပ်လောင်း ပံ့ပိုးပေးနိုင်ခဲ့ သည်။
“ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူအသစ်တွေ ဖြစ်တဲ့ Anthem Asia နဲ့ DPI Energy Ventures တို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမူ အဖွဲ့ထဲမှာ ပါဝင် လာတာကို ကြိုဆိုဖို့ စိတ်လှုပ်ရှားနေပြီး အရင်ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူတွေဖြစ်တဲ့ TRIREC, Insitor, Great Noble နဲ့ FORUM ကုမွဏီ တို့ ဆက်လက်ပါဝင်ပေးတဲ့အတွက်လည်း ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ ဒီရင်းနှီးမြှပ်နှံမူအသစ်ရရှိခြင်းက စိန်ခေါ်မူတွေ များပြားလွန်းတဲ့ ဒီနှစ်အစပိုင်းကတည်းက ကျွန်တော်တို့ နည်းဗျူဟာတွေ မှန်မှန်ကန်ကန် ချမှတ်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာ အကောင်းဆုံး သက်သေပြချက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရင်းနှီးမြှပ်နှံမူ ငွေကြေးကိုအသုံးပြုပြီး ဆိုလာဟုမ်းရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တွေကို တိုးချဲ့ဖို့၊ သုံးစွဲသူတွေကို ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ထုတ်ကုန်တွေ ဝန်ဆောင်မူပေးနိုင်ဖို့နဲ့ ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူတွေ၊ အကျိုးတူပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေ သူတွေနဲ့အတူ ပိုမိုအောင်မြင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ဆက်လက်ရပ်တည်သွားဖို့ ကျွန်တော့်မှာ ယုံကြည်ချက်ရှိပါတယ်။ “ ဟု ဆိုလာဟုမ်း၏ CEO Geert Jan Ten Hoonte ကပြောသည်။
စတင်တည်ထောင်လာခဲ့သည့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှစ၍ ဆိုလာဟုမ်းသည် သုံးစွဲသူများ လိုအပ်နေသည့် ထုတ်ကုန်များကို အဓိကထား ဝန်ဆောင်မူပေးခြင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဈေးကွက်ဦးဆောင်သူ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမူ ပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈သန်းအထိ တိုးမြင့်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်းလုံးရှိ အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၃၅၀၀၀ ကျော်ကို အရည်အသွေးမြင့်မားသည့် ဆိုလာထုတ်ကုန်များ ဝန်ဆောင်မူပေးပြီးဖြစ်သည်။ ဆိုလာဟုမ်းသည် ClenTech APAC ၏ တီထွင်စမ်းသစ်မူ အရှိဆုံး ကုမွဏီ ၂၅ခု စာရင်းတွင် လူမူရေးလုပ်ငန်းများတွင် ဦးဆောင်သူအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရ ပြီး E27 ၏ အရှေ့တောင်အာရှအတွင်း လူမူအကျိုးပြု ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီ ၁၀ခုတွင်လည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။
Previous articleInfobip Launches Digital Cloud Contact Center Solution
Next articleBig Bad Wolf Book Sale Going Online This Year